Ndụmọdụ maka ịsa uwe na-enweghị mmetọ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ndụmọdụ maka ịsa uwe na-enweghị mmetọ
Fausto Ramirez | | Nchekwa ike, Homelọ Green
La saa Ọ bụ otu n'ime ọrụ a na-arụ mgbe niile na-enweghị atụta nsonaazụ ya, na-eri nnukwu mmiri (na-a drinkụkarị) na ihe nchacha. Ka anyị lee ụfọdụ ndụmọdụ maka ịsa ahụ uwe n’enweghi mmetọ.
Ncha ncha obibi, India na-asacha mkpụrụ, ihe egwuregwu bọọlụ, mmiri oyi ... usoro a niile metụtara ọmụmụ ihe dị ndụ. Ha nwere mmekọrịta ncha maka saa, na ihe ziri ezi karị n'ụzọ esi asa akwa na-enweghị mmetọ nke ukwuu.
Ọ bụrụ na nhicha nke uwe elu nwere ngwa ngwa, ekwesighi iji igwe akwa ahụ na otu uwe ahụ, ebe ọ bụ na igwe ahụ nwere ihe ize ndụ nke iri oke ume na mmiri maka dum nkata akwa. Ya mere, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji akwa ndị ọzọ mezue ya ma ọ bụ were nsogbu nke ịsa aka ya.
Na nke ncha nke a na-eji adabere na ike nke mmiri. Na ụkpụrụ, a na-egosipụtakarị ya na ncha ncha, ebe akara ego a ga-agbakwunye na uwe akara. Iri obere ncha, I nwere ike iji na-asacha mkpụrụ, nke bụ eke ngwaahịa na-asachapụ ekele na saponins nwere.
La ịsa ahịhịa N'ụzọ dị irè uwe ọcha na uwe siri ike. A na-eji aka ma ọ bụ igwe eji asacha igwe eji asa akwa, na okpomọkụ sitere na 30 ruo 90º C. Nri ịsa ahụ bụ mkpụrụ nke osisi na-eto na India, na Nepal, nke Sapindus Mukorossi, nke a na-akpọkwa "osisi ncha."
Ndi mmadu ji ịsa mkpụrụ dị n'echiche na ọ bụ ncha ụlọ, na ọ na-asakwa yana ncha ndi ochie. Mana ekwesiri ime ka o doo anya na maka uwe ezigbo ruru unyi i ji ji asacha nkpuru na ufodu ntụ iji koo achịcha. Nri a na-asacha akwa nke ọma na mmiri na 30º C.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Homelọ Green » Ndụmọdụ maka ịsa uwe na-enweghị mmetọ
Akwụkwọ nri 8 nke nwere ike itolite n'otu n'otu
Ighaghari akwukwo na kaadiboodu